शिव श्रेष्ठ र करिश्मा मानन्धरका छोराछोरीको जादू चल्ला? :: Setopati
शिव श्रेष्ठ र करिश्मा मानन्धरका छोराछोरीको जादू चल्ला?
शक्ति श्रेष्ठ र कविता मानन्धरको 'डेब्यू' फिल्म 'एउटा यस्तो प्रेम कहानी' भोलि बिहीबार सार्वजनिक हुँदैछ। महामारीका कारण बन्द सिनेमा हल खुलेपछिको यो नै पहिलो सार्वजनिक फिल्म हुनेछ।
एक समयका चर्चित कलाकार शिव श्रेष्ठ र करिश्मा मानन्धरका छोरा र छोरी सँगै पर्दामा देखिन लागेकाले यो फिल्मबारे धेरैको चासो छ। दस महिनापछि हलमा प्रदर्शन हुने पहिलो नयाँ फिल्म भएकाले पनि 'एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ लाई चासोका साथ हेरिएको छ।
शिव र करिश्मा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा धेरै रूचाइएको जोडी हो। ‘नासो’, ‘ट्रक ड्राइभर’, ‘सपना’, ‘मनकामना’, ‘मिलन’, ‘आतंकवाद’, ‘पन्छी’ लगायत फिल्ममा उनीहरूले सँगै अभिनय गरेका छन्।
आफ्नो समयका सफल यी दुई कलाकार अझै पनि फिल्म क्षेत्रबाट टाढिएका छैनन्। यिनै दुई शीर्ष कलाकारका सन्तान नेपाली फिल्म क्षेत्र प्रवेश गर्दैगर्दा नेपालमा 'स्टार किड' को भविष्यबारे चर्चा भइरहेको छ।
शिव श्रेष्ठका छोरा शक्ति र करिश्मा मानन्धरकी छोरी कविताको जोडी जम्ला त? के उनीहरू बुवा र आमाको विरासत धान्लान् त?
फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’को टाइटल गीत गत मंगलबार मात्र सार्वजनिक भएको छ। गीतको कमेन्ट हेर्ने हो भने धेरैले शक्ति र कवितालाई शुभकामना दिएका छन्। युट्युब प्रतिक्रियामा एक जनाले लेखेका छन्, ‘यो फिल्म हलमा हेर्न जाने होइन त?’
गीतको शब्द र संगीत धेरैले मन पराएका छन्। गीत र भिडिओले मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। कतिले आफ्ना छोराछोरीलाई प्रतिभाबिना प्राथमिकता दिएको भन्दै ‘नेपोटिजम’ भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
‘बरू सुहानालाई हिरोइनमा लिए हुन्थ्यो,’ झरना थापाकी छोरी सुहाना थापासँग कवितालाई तुलना गर्दै एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्।
यो फिल्मको घोषणा करिब दुई वर्षअघि नै भएको हो। तर केही कारणवश समयमै यो तयार भएन।
‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ सार्वजनिक नै हुँदैन पनि भनिएको थियो। तर फिल्म भोलि सार्वजनिक हुँदैछ।
फिल्ममा शक्ति र कवितासँगै शिव श्रेष्ठ, प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशी, वर्षा राउत, संजोग कोइराला, बसुन्धरा भुषाल, मिथिला शर्मालगायत कलाकारको अभिनय छ। शिव श्रेष्ठ फिल्मका निर्माता पनि हुन्। फिल्मको निर्देशन दिपेश सापकोटाले गरेका हुन्।
अहिले सिनेमा हल खुले पनि दर्शकको चाप बढ्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। त्यसैले तुरून्तै ठूला ब्यानरका फिल्म सार्वजनिक गर्न निर्माताहरू हिचकिचाएको अवस्था छ।
शिवले भने सरकारले सिनेमा हल खोल्ने अनुमति नदिँदै फिल्म सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए। धेरैले यसलाई शिव श्रेष्ठको चर्चामा आउने काइदाको रूपमा लिएका छन्। यद्यपि कोरोना महामारीले फिल्म उद्योग ‘कोमा’ मा पुगेको परिस्थितिमा नयाँ फिल्म सार्वजनिक गरेर उद्योगलाई टेवा पुर्‍याउने शिवको दाबी छ।
फिल्म सार्वजनिक हुनु तीन दिनअघि मात्र ट्रेलर सार्वजनिक भएको फिल्म सफल असफल जे भए पनि विभिन्न कारण चर्चामा आउन र मान्छेको ध्यान खिच्न सफल भइरहेको छ।
लकडाउनपछिको माहोल र 'स्टार किड' का कारण चर्चा पाए पनि फिल्मबाट शक्ति र कविताले दर्शकको मन जित्न सक्लान्?
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७, ०८:०७:००
गण्डकी सरकार फाल्न बिहीबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षीको तयारी
निर्माणको अन्तिम चरणमा कमलपोखरी, के बनिसक्यो, के बाँकी छ?
जात्रामय बन्यो भक्तपुर र थिमि, बिस्केट जात्रामा हजारौंको भीड
स्वर्गद्वारी जाँदै गरेको जीप दुर्घटना: जिप्रका गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृतसहित तीनको मृत्यु
बेलहिया नाकामा हेल्थडेस्क: तापक्रम लिँदै प्रवेश गराइँदै
मेलम्चीको पानी पुस-माघसम्म पाइपबाट चुहिने, बनाउन महिनापिच्छे ३० लाख खर्च हुने
साइकल र नयाँ वर्ष
वीरगञ्जमा भारतबाट भित्रिएको कोरोना समुदायमा फैलिएको आशंका
'एमएस धोनी'का निर्देशक र नेपाली निर्देशक हेमराज बिसीले मिलेर नेपाली फिल्म बनाउने
केकी अधिकारीको नयाँ ‘लुक्स’
पूजा शर्माले वर्षा राउतलाई भनिन्, 'ल यार, मेरो छोरालाई केयर गर...'
नीता र हरिहरको सम्बन्ध दोस्ती-यारी कि प्रेम ?
को होलान् गायिका ईन्दिरा जोशीको प्रेमी ?